Futhi kuyo yonke imizi kwanoma yiliphi ilizwe imelelwa ezihlukahlukene izikhungo ukukhonza ukudla okuhlukahlukene ezahlukene. Inhlokodolobha Russian siyasebenza izindawo eziningi kangaka sonkana, ngakho ukhethe the best phakathi kunzima kakhulu ngempela. Kulesi sihloko encane sizoxoxa ngokuningiliziwe eyodwa project restaurateurs, banake omiyo kulabo ufuna ukuba nesikhathi esikhulu endaweni ezithakazelisayo, futhi ngesikhathi esifanayo ukuzama ezihlukahlukene yobuciko ukupheka yesimanje.
"Isikebhe likaPetru" - kahle owaziwa emhlabeni namuhla eMoscow yokudlela chain, okuyinto njengamanje sifakiwe izindawo 2 kuphela. Esihlokweni lanamuhla sizoxoxa zombili lezi zindawo, ukubuyekezwa wabo, ikhadi main izitsha, kanye nezinye izinto eziningi, ngenxa impahla okuxoxwe ngazo kulesi zokudlela.
"Isikebhe likaPetru" Ehlathini
Le ndawo yokudlela ezithakazelisayo itholakala kuleli kheli elilandelayo: ul. Ihlathi, indlu 45th. kaMasipala iziteshi abaseduze kakhulu "uMendeleyev", "Novoslobodskaya" futhi "Belorusskaya". Futhi Kuyaphawuleka ukuthi le project wavulwa Disemba 19, 2001, okusho ukuthi liye ukusebenza engaphezu kwengu-15.
Omunye imiqondo esemqoka nesekelayo isikhungo ukwakha ukukhanya ngesikhathi esifanayo ekhululekile umoya iMedithera. Kunengqondo ukuthi ukubuya kwehlobo futhi ukudlala ziyabonakala hhayi kuphela e nomqondo isikhungo esisodwa, kodwa futhi nomklamo walo.
Futhi uzinake ukuthi noma ubani angaba oda ezihlukahlukene cuisine Mediterranean kule sikhungo. Xhumana nomphathi cafe ukuxoxa unemibuzo noma ukucacisa ukuthi kungenzeka noma yimuphi umcimbi idili kungenzeka enmbololweni lokuphekiwe esemthethweni indawo yokudlela. Ivula amahora: nsuku zonke kusukela emini kuze kube phakathi kwamabili.
Qiniseka ukuba banake yokuthi kuyo yonke indawo yakwa-yokudlela siyasebenza kahle, i-Internet, futhi le score isilinganiso kule isikhungo uyahluka ayizinkulungwane 3 ruble. Ngaphezu kwalokho, njengengxenye ikhefi-bar izici ithala ehlobo, lapho umuntu angaba in the izinkathi efudumele isikhathi.
"Isikebhe likaPetru" ku Vavilova
Okuxoxiswana ngakho okwamanje yokudlela "Isikebhe likaPetru" wavulwa emva kweminyaka 6. kuvulwa kwaba 2007, kanye nesikhungo uqobo kwaba phambili umqondo yangaphambili yokudlela. Lokhu cafe-bar ezithakazelisayo isendaweni Vavilov Street (wama-39 endlini), futhi isebenza isimiso esifana yokudlela lokuqala: kusukela emini kuze kube phakathi kwamabili. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi lokhu ukusungulwa itholakala eduze isikhungo, kodwa ngaso sonke isikhathi onokuthula ukhululekile, kodwa befuna komuzi ngalesi wonke umuntu iphuzu bazokwazi ukukhohlwa.
Indawo yokudlela "Isikebhe likaPetru", esisogwini Vavilov Street, kunezinzuzo eziningana, phakathi esimelela ngokuqondile wezangaphakathi. Ukwenza izindawo ilungele imihlangano ibhizinisi noma ukugubha usuku lokuzalwa, dinner yothando noma umndeni yokuzijabulisa. Ngaphezu kwalokho, noma yimuphi isivakashi ungakwazi ukujabulela ezihlukahlukene izitsha ngokusekelwe zokupheka zakudala olwesimanje futhi cuisine Balkan. Noma ubani angakwazi uxhumane nomphathi futhi ungacela yonke imibuzo yakho, ngokwesibonelo, ukucacisa kungenzeka isenzakalo esithile.
Abaningi bakholelwa ukuthi zonke yokudlela "Isikebhe likaPetru" has a imenyu ahlukene ngokuphelele. Kuyinto, eqinisweni izikhungo inethiwekhi, okuyinto okwamanje evulekile ezimbili kuphela, okwethulwa ngempela ibalazwe izifundo ezahlukene ngokuphelele, cookery yobuciko zazo okulungiselelwe labapheki okuhlangenwe nakho kulaba bantu Russian Federation.
Sesixoxile kakade ngemibhalo ngokuningiliziwe zonke yokudlela "Isikebhe likaPetru" (eMoscow), kodwa imininingwane asikhulumi mayelana imenyu. Manje ake ukukulungisa wenze ukubuyekeza okusheshayo izitsha ngamunye izikhungo ngenhla.
Izibiliboco phezu Ihlathi
Ngezinye Ihlathi ubani Ungazama inyama kanye nenhlanzi izitsha, amasobho, appetizers, salads, side izitsha, nama-dessert, kwasolwandle, pasta kanye risotto, kanye nezinye yobuciko eziningi ukupheka yesimanje. Ngakho, uma ufuna nambitha ukudla okumnandi kakhulu empilweni yakho, qiniseka ukuthi oda ribeye Steak for ruble 1180, okuyinto wakhonza amazambane ecubuziwe. Ngaphezu kwalokho, ukunakekelwa okufanele kube inkukhu isobho ngoba ruble 380, ukhilimu asparagus isobho ngoba ruble 490, futhi lokhu isidlo ezithakazelisayo kuyinto isobho ngokuthi bouillabaisse, obiza ruble 1290.
Uma ufika ingxoxo namuhla yokudlela ukuzama amaswidi, qiniseka oda pancake, poppy imbewu strudel noma Mousse umango fresh, okwabangela inhlekelele 320, 390 kanye 390 ruble, ngokulandelana.
Izidlo ku Vavilov
Ngakho, izivakashi kule iIgama indawo Vavilov nethuba lokujabulela isidlo, inhlanzi nenyama izitsha, salads, amasobho, izithelo kanye berry dessert, kanye nenamba enkulu iziphuzo, phakathi okuyinto ukugqamisa engabiza ikhofi ncamashi brandy, i-gin, utshwala, liqueurs, whiskey Bourbon, lemonade okuzenzela, fresh zezithelo kanye nokunye okuningi.
Kubathandi izinhlanzi izitsha akhonzwa Steak for ruble 740 i-halibut umucu Dorado ngoba ruble 790 nama-octopus sasipheka iresiphi okuzenzela for ruble 980. Uma nithanda kwasolwandle, khona-ke kufanele nakanjani nambitha squid ukuze ruble 410, 690 ruble ngoba scallop, ihlosi prawn ngoba ruble 600 noma izimfanzi yakudala ruble 510.
Indawo yokudlela Izibuyekezo inthanethi kwaxoxwa namuhla omuhle kakhulu. Abantu bayajabula nezinga eliphezulu of service futhi izinga lihle ukudla wakhonza. Ngaphezu kwalokho, yokudlela Izibuyekezo abonisa elingaphakathi yesimanje futhi ukubhekana nabo.
Ngokuvamile, cishe zonke izivakashi zincome nakanjani kokubili zokudlela ukuvakashela. Bon appétit!
Indawo yokudlela "Vasnetsov" (Kirov): incazelo, imenyu, ukubuyekezwa
Sezempilo izingane kazwelonke "Zubrenok": incazelo, izithombe, izibuyekezo
Symphyotrichum Novi-belgii: zokutshala nokunakekela